Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Đắng -> Omume Ọjọọ
Omume Ọjọọ: [Đắng]
Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác.”
 Ma ugbu a bụ oge iwezụga ihe ndị a na ndụ unu: iwe, na ọnụma, na obi ọjọọ, na nkwulu nile, ya na okwu ihere nile na-esi unu nꞌọnụ na-apụta. Unu agwala ibe unu okwu ụgha, nꞌihi na unu eyipụla mmadụ ochie ahụ na-eme ụdị omume a. Ugbu a unu eyikwasịla ndụ ọhụrụ ahụ, nke bụ mmadụ ọhụrụ ahụ Chineke onye kere ya na-eme ka ọ na-adị ọhụrụ mgbe nile, na nke na-agbalị ịdị ka Kraịst. Nkewa ọ bụla adịghị nꞌime ndụ a. Ọ dịghị mkpa ebe onye ọ bụla si pụta, ma ọ bụ onye Juu ma ọ bụ onye mba ọzọ, ma ọ bụ onye e biri ugwu, ma ọ bụ onye a na-ebighị ugwu. Ọ dịkwaghị mkpa ma ọ bụ onye na-asụ asụsụ ọzọ, ma ọ bụ onye ime ọhịa, ma ọ bụ ohu, ma ọ bụkwanụ onye nwe onwe ya. Ihe dị mkpa bụ ma Kraịst o bikwa nꞌime onye ahụ, nꞌihi na Kraịst dịrị mmadụ nile. Ebe Chineke họpụtara unu mee unu ndị nke ya site nꞌinye unu ndụ ọhụrụ a, ebe ọ bụkwa nꞌihi na ọ hụrụ unu nꞌanya ka o ji họpụta unu, bụrụnụ ndị nwere obi ebere, ndị obi ọma, ndị dị nwayọọ, na ndị na-enwe ogologo ntachi obi. Jirinụ obi dị umeala na-anagide mmejọ ibe unu mejọrọ unu, ma gbagharakwa ha. Chetanụ na Chineke nꞌonwe ya gbaghaara unu, ya mere gbaghakwaranụ ibe unu.
 Nna unu bi nꞌeluigwe ga-agbaghara unu mmehie unu ma ọ bụrụ na unu agbagharakwa ndị na-emehie megide unu. Ọ bụrụkwanụ na unu ajụ ịgbaghara ndị na-emehie megide unu, ọ gaghị agbaghara unu. ***
 Gbalisie ike mee ka gị na ndị ọzọ biri nꞌudo. Bie ndụ dị nsọ, nꞌihi na ọ bụ nanị ndị dị nsọ ga-ahụ Chineke. Ka onye ọ bụla hapụ ime ihe ga-egbochi ihuọma Chineke. Ekwela ka obi ilu gbaa mgbọrọgwụ nꞌime unu ibutere unu nsogbu. Ụdị obi ilu ahụ pụrụ ime ka ndị ọzọ daa mba nꞌokwukwe ha.